NY FOMBA FANAMBOARANA SOLOSAINA DIA MATY HO AZY - MALEMY
Ny fomba fanamboarana solosaina dia maty ho azy
Tapitra ho azy ve ny solosainanao? Tsy afaka miditra amin'ny PC-nao akory ianao satria mihidy ho azy alohan'ny ahafahanao manoratra ny teny miafinao? Aza manahy fa eo anelanelan'ny mpampiasa an'arivony maro izay miatrika an'ity olana ity isan-taona ianao ary ny antony mety mahatonga an'ity olana ity dia ny fanafanana be loatra ny solosainao. Somary toy izao ny olana:
Hikatona tampoka ny PC-nao rehefa mampiasa azy ianao, tsy misy fampitandremana, tsy misy. Rehefa manandrana mamerina azy io ianao dia hanomboka ara-dalàna, fa raha vantany vao tonga eo amin'ny efijery fidirana ianao dia ho faty ho azy indray, toy ny teo aloha ihany. Ny mpampiasa sasany dia lasa nandalo ny efijery fidirana ary afaka mampiasa ny PC mandritra ny minitra vitsy, fa amin'ny farany dia nakatona ihany koa ny solosain'izy ireo. Izao dia niraikitra tao anaty loop fotsiny izy ary na firy na firy na firy fotoana iverenana na iandrasanao ora vitsy alohan'ny hamerenanao azy dia hahazo valiny mitovy foana ianao, .i.e. hamono tena ny solosainao, na inona na inona ataonao.
ny fomba fanamboarana ny hadisoan'ny mpamily Windows 10
Amin'ny tranga toa an'ity mpampiasa ity dia manandrana mamaha ny olany amin'ny fanapahana ny kitendry na ny totozy, na ny fanombohana PC amin'ny Safe Mode, sns .. fa ny vokany dia hitovy, izay PC dia ho faty ho azy. Ankehitriny dia misy antony roa lehibe ihany izay mety hiteraka fanidiana tampoka ny rafitrao, ny famatsiana herinaratra diso na ny resaka hafanana be loatra. Raha mahatratra ny mari-pana efa voalamina mialoha ny PC dia hikatona ho azy ny rafitra. Ankehitriny, hitranga izany mba tsy hanimba ny PC-nao, izay tsy azo antoka. Ka raha tsy mandany fotoana dia andao jerena ny Ahoana ny fomba hanamboarana solosaina dia maty ho azy miaraka amin'ny alàlan'ny torolàlana momba ny famahana olana etsy ambany.
Fomba 1: Mihazakazaha CCleaner sy Malwarebytes (Raha afaka miditra amin'ny Windows ianao)
Fomba 2: vonoy ny fanombohana haingana
Fomba 3: Olana amin'ny rafitra fiasa
Fomba 4: mamantatra ny olana momba ny hafanana be loatra
Fomba 5: Manadio ny vovoka
Fomba 6: famatsiana herinaratra
Fomba 7: Olana mifandraika amin'ny hardware
Hamarino tsara fa mamorona teboka famerenana , sao sanatria misy tsy mety.
1. Sintomy sy apetraka CCleaner & Malwarebytes.
2. Mihazakazaha Malwarebytes ary avelao izy hanitsy ny rafitrao raha mila rakitra manimba. Raha hita ny malware dia esoriny ho azy ireo izany.
3. Mihazakazaha CCleaner ary safidio Madio madio .
4. Eo ambanin'ny Custom Clean, safidio ny Vakizoro Windows ary ny defaults checkmark ary kitiho hadihadiana .
5. Vantany vao vita ny famakafakana, alao antoka fa azo antoka fa hanala ireo fisie hamafana ianao.
6. Farany, kitiho ny Run Cleaner bokotra ary avelao i CCleaner hihazakazaka ny làlany.
7. Hanadio bebe kokoa ny rafitrao, safidio ny tabilao Registry , ary alao antoka fa voamarina ireto manaraka ireto:
manomboka sakafo sy ny sisiny tsy mandeha
8. Tsindrio ny Sakano ny olana bokotra ary avelao ny CCleaner hijerena, avy eo tsindrio ny Amboary ireo olana voafantina bokotra
9. Rehefa manontany i CCleaner Ianao ve mila fanovana nomaniny ho solon'izay ny rezistra? mifidy Eny .
10. Raha vantany vao vita ny backup anao dia kitiho ny Amboary ny olana rehetra voafantina bokotra
11. Avereno ny PC-nao mba hamonjy fiovana.
1. Tsindrio Windows Key + R avy eo soraty ny fanaraha-maso ary tsindrio Enter raha hanokatra Takelaka fikirakirana.
2. Tsindrio eo Fitaovana sy feo tsindrio avy eo Safidy herinaratra .
3. Avy eo, avy amin'ny varavarankely ankavia mifantina Safidio izay ataon'ny bokotra herinaratra.
Windows Update 1903 niraikitra tamin'ny 99
4. Tsindrio izao Hanova ny toe-javatra izay tsy misy amin'izao fotoana izao.
5. Uncheck Alefaso ny fanombohana haingana ary tsindrio eo Tehirizo ny fanovana .
Ny rafitra misy anao angamba no misy ny olana fa tsy ny fitaovana finday. Mba hanamarinana raha misy izany dia mila Power ON ny PC-nao ianao ary avy eo Ampidiro ny fametrahana BIOS. Izao indray mandeha ao anatin'ny BIOS, avelao hipetraka tsy miasa ny solosainanao ary jereo raha nakatona ho azy toy ny teo aloha izy. Raha tsy mihidy ny PC-nao dia midika izany fa maloto ny rafitra ampiasainao ary mila averinao indray. Jereo eto Ahoana ny fanamboarana fametrahana Windows 10 ny Fix Solosaina maty ho azy.
Ankehitriny dia mila manamarina ianao raha noho ny hafanana be loatra na ny famatsiana herinaratra diso fotsiny no antony, ary mila mandrefy ny maripanan'ny PC ianao. Ny iray amin'ireo freeware hanao an'io dia Speed ​​Fan.
DOWNLOAD ary tantano ny fampiharana ny Speed ​​Fan. Avy eo zahao raha miakatra be ny solosaina na tsia. Hamarino raha ao anaty faribolana voafaritra ny maripana, sa ambonin'izy ireo izany. Raha toa ka mihoatra ny mahazatra ny famakiana ny maripanao, dia midika izany fa tranga hafanana be loatra. Araho ny fomba manaraka hamahana ilay olana tafahoatra.
tsy hifoha amin'ny fomba fatoriana ny solosaina
Fanamarihana: Raha mpampiasa vao manomboka ianao dia aza manao izany ny tenanao, mitadiava matihanina afaka manadio ny PC na solosainao ho an'ny vovoka. Tsara kokoa ny mitondra ny PC na solosainao finday any amin'ny foibe serivisy izay hanaovan'izy ireo izany ho anao. Ny fanokafana ny tranga PC na ny solosaina findainy dia afaka manafoana ny fiantohana, koa manohiza mety hitera-doza anao manokana.
windows tsy afaka mamita ny fitrandrahana
Hamarino fa nipetraka tao amin'ny Power Supply, Motherboard, RAM, vavahady rivotra, kapila matevina ny vovoka madio ary ny zava-dehibe indrindra amin'ny Heat Sink. Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny fampiasana blower fa alao antoka fa apetrakao amin'ny farafahakeliny ny fahafahany, raha tsy izany dia hanimba ny rafitrao ianao. Aza mampiasa lamba na fitaovana mafy hafa hanadiovana ny vovoka. Azonao atao koa ny mampiasa borosy hanadiovana vovoka amin'ny PC-nao. Rehefa avy manadio ny vovoka dia jereo raha mahavita ianao Fix Computer dia mamono ny olana mandeha ho azy, raha tsy izany dia tohizo amin'ny fomba manaraka.
Raha azo atao dia jereo raha miasa ny heatsink raha tsy mandeha ny PC anao raha tsy mandeha ny heatsink dia mila soloinao izany. Hamarino tsara fa esory ny Fan ao amin'ny motherboard anao ary avy eo diovy amin'ny borosy. Raha mampiasa laptop ianao dia mety ny mividy cooler ho an'ny solosaina finday, mamela ny hafanana hivoaka avy amin'ny solosaina finday mora foana.
Voalohany indrindra, jereo, raha misy vovoka mipetaka amin'ny Power Supply. Raha izany no izy, manandrama manadio ny vovoka rehetra amin'ny herinaratra ary manadio ny mpankafy ny famatsiana herinaratra. Raha azo atao dia andramo atao ny mamadika ny PC-nao ary jereo raha mandeha ny fitaovana famatsiana herinaratra ary zahao raha miasa ny mpankafy ny herinaratra.
Indraindray ny tariby malalaka na diso dia mety ho olana koa. Mba hanoloana ny tariby izay mampifandray ny tarika famatsiana herinaratra (PSU) amin'ilay motherboard dia zahao raha manamboatra ilay olana ve izany. Fa raha mbola maty ho azy ny solosainanao nefa tsy misy fampandrenesana dia mila soloinao ny Unit Power Supply iray manontolo. Mandritra ny fividianana tarika famatsiana herinaratra vaovao dia zahao ny naotiny raha oharina amin'ny naoty nomen'ny mpanamboatra solosainao. Jereo raha hainao Fix Computer dia mamono ny olana mandeha ho azy rehefa avy nanolo ny Power Supply.
Raha vao nametraka singa fitaovana vaovao ianao, dia io antony io no mamono ho azy ny solosainao. Na dia mbola tsy nanampy fitaovana vaovao aza ianao dia mety hiteraka lesoka ihany koa ny singa tsy mandeha amin'ny laoniny. Ka alao antoka fa mihazakazaka fitsapana diagnostika rafitra ianao ary jereo raha miasa araka ny nampoizina ny zava-drehetra.
Ahoana ny fomba hanehoana fanitarana rakitra amin'ny Windows 10
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fampiasana angona tambajotra amin'ny Windows 10
Amboary ny Action Center Tsy miasa ao amin'ny Windows 10
Ahoana ny fomba hanafoanana ny bokotra View View ao amin'ny Windows 10
Izay no nianaranao tsara Ny fomba fanamboarana solosaina dia maty ho azy olana fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity torolàlana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Ny CPU dia mandeha amin'ny 100 rehefa manokatra chrome
ampio lakile windows amin'ny kaonty microsoft
Windows 10 solosaina dia miverina tsy ampoizina
Tsy nihetsika intsony ny mpamily windows 10
apetraho amin'ny birao ny solosainako
fampiharana Windows 10 tsy misokatra